Kachasị mma CORFU NA DABỌCH 4 XNUMX | Akụkọ Njem
Ihe kacha mma nke Corfu na ụbọchị 4
Osimiri na Resorts | | General, Islands, njem
Thezọ kachasị ọsọ iji ruo Corfu sitere na Atenas, na ọtụtụ njikọ ikuku n'otu ụbọchị. Nhọrọ kachasị mma iji gaa agwaetiti ahụ bụ ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ ọgba tum tum. Corfu E wuru ya n’etiti agwaetiti ahụ, n’otu ebe nke obodo ochie ahụ. Ọ ka na-echebe akụkụ nke mgbidi dị nso na necropolis ochie. Acropolis oge ochie dị n’elu ugwu Mon Repós na Analipsi. Templelọ nsọ kachasị mkpa bụ nke Hera. Na nso ebe obibi ndị mọnk nke San Teodoros ị ga-ahụ ụlọ nsọ a ma ama nke Atemis. Otu n'ime ihe ncheta kachasị mkpa bụ Basilica nke Paleopolis yana mosaics ya, Santos Jason Sosipatro, na mgbakwunye na ọtụtụ ụka ndị ọzọ post-Byzantine, dịka nke San Espiridon.
Na akụkụ ochie nke obodo ahụ, e nwere nnukwu ebe mgbaba Venet nke malitere iwu na s. XV na nke ahụ tolitere na ohere pere mpe, nke nwere ụlọ nke ọtụtụ ala, ọ na-abụkarị ochie na warara n'okporo ámá.
Otu n'ime ọmarịcha ijegharị na isi obodo bụ ụzọ nke ọdụ ụgbọ mmiri, na-esote mgbidi ahụ ma site ebe ahụ na-atụgharị echiche panoramic nke obodo. Echefula ileta ebe ngosi ihe mgbe ochie, ihe ngosi nka nke Asia, tinyere ndị ọzọ. Ndị bi na ya bụ omenala na ọmarịcha. Obodo nke Kanoni, nke dị nso na nke a, bụ ụlọ ụka a ma ama nke Virgin Vlajerna, n'agwaetiti jikọtara agwaetiti ahụ site n'ụzọ dị warara.
Site Corfu Enwere ike ịme njem iji gaa agwaetiti ndị dị nso, dị ka agwaetiti dị n'ihu obodo ahụ, Vido. Site na Sidari rue agwaetiti Ericusa, rue Mazraki na Ozoni. Njem njem kachasị akwado bụ ụbọchị gaa agwaetiti Paxi na Antipaxos.
N'ime osimiri ndị a kacha atụ aro bụ: Jalicunas, Bitalades, Marathias, Skudi, Megas joros, Perulades, Aulaki, Aguios Stefanos, Kerasia, Paramonas, Mirtiotisa, Mon Repos, Kondokali, Guvia, Nisaki, Kasiopi, Sidari, Paleocastricha, Ermones, Glifada, Pélecas, Mesongui, Limni, Ai Gordis, Cavos, Benitses, wdg ...
Site KanoniJiri obere ụgbọ mmiri, ị nwere ike ịga Pondiconisi, obere agwaetiti jupụtara na ahịhịa na ụka ya nke Pantocrator. Àkwà mmiri dị warara jikọtara Kanoni na Perama, nke kwesịrị ịga leta. Na Dassia ị ga-ahụ otu n'ime akụkụ kachasị cosospolitan nke agwaetiti ahụ. Ebe ọzọ na-eme njem nleta bụ Ipsos. Otu n'ime obodo ndị a kacha nleta bụ Nisaki, ebe ọtụtụ obere ụgbọ mmiri na-aga n'ụsọ osimiri dị iche iche na n'ime ime agwaetiti ahụ. Obodo ndị ọzọ a na-agakarị bụ Casiopi, obere obere obodo mara ezigbo mma. Gaa leta Sidari, ụlọ ya nke Venetị na ọwa mmiri dị warara. Bogbọ mmiri si ebe a gawa agwaetiti nke Ozoni, Ericusa na Mazraki. Paleocastricha bụ obodo a kacha mara amara na agwaetiti na osimiri kachasị amasị ndị agwaetiti, nke ga-abụ 🙂 maka ihe kpatara ya. Echefula ọdịda anyanwụ site na Paleocastricha 🙂
via Asụsụ Grecotur
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Islands » Ihe kacha mma nke Corfu na ụbọchị 4
Tokyo, "alaeze nke microchip" (IIIa)
Chọọchị ebe a na-eme emume Katọlik mbụ